Socda Si Black Forest Germany The | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Socda Si Black Forest Germany The
Waayo, kuwa aan horay war, Black Forest waa gobol baaxad weyn oo ku yaal koonfur-galbeed Jarmalka. More si gaar ah, waxa uu ku yaalaa gobolka Baden-Wurttemberg oo degan qayb weyn waxaa ka mid ah.
Waxaa intaa dheer, gobolka waa ee xuduudda la leh France iyo Switzerland, sidaas darteed waa ka yimid wadamada kuwa la heli karo iyo sidoo kale.
In this article, waxaan ka hadli doonaa badan oo ku saabsan sababta ay booqo. Tan ugu muhiimsan, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo gaari Forest Black ee Germany tareen.
The Beauty of Gobolka
Beauty of gobolka been in dabeecada, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka oo muuqaal dabiici ah. Sida qayb ka mid ah dabeecadda, degaanka waa, si fiican u, buuxsamay kaymaha. qayb taasina waa is-sharaxaadda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo kale oo badan, waxa uu!
Black Forest The, ama Schwarzwald sida uu ugu yeedhay in Jarmal, leedahay meelo badan oo la views qurux badan dusha. Waxaa sidoo kale ka buuxsamay webiga cajiib ah dooxooyin iyo qoraxdu, danbow qurux badan kuwa badan buuraha in aad halkan ka heli karto.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira nasasho dalal noqon kara oo xiiso leh in ay dad badan oo. Waxaad ka heli kartaa qoyska is dajiyaan meelaha, weeynaa laba, iyo cabsi-u Waxyoon Bbc muddo ah dadka adventurous.
Waa maxay more, waxaad ka heli doontaa gobolka oo dhan qurux badan iyo ekayd u ​​eg sanadka oo dhan dheer! Taasi waa xaqiiqo dhab ah oo sababta oo ah waxa ay u muuqataa mid cajiib ah marka ay qoraxdu, roobaadka, iyo marka ay jiraan baraf. Taas waxaad si muuqata uga dhex arki kartaa gudaha sawirada ugu badan ee deegaanka.
Offenburg in Tareenadu Konstanz
Stuttgart in Tareenadu Offenburg
Leipzig in Tareenadu Dresden
Nuremberg in Tareenadu Stuttgart
Sida loo keen Forest Black by tareenka
Gaaritaanka Forest Black by tareenka waa wax aad sameyn karto siyaabo badan. Taasi inta badan sababta oo ah meesha uu gobolka iyo xaqiiqda ah in tababar safarka iyada oo Germany waa fantastic.
Si kastaba ha ahaatee, sidaas maaha oo dhan. Waxaad gaari kartaa dalal badan oo gobolka ka dhowaad qayb kasta oo ka mid ah Europe. Taasi waa run gaar ahaan loogu talagalay magaalooyinka waaweyn dalalka sida France, Switzerland, Austria, Belgium, Italy, iyo qaar badan oo.
Sida Germany, safarka tareenka laga sameeyey fududahay sida hal shirkad - Deutsche Bahn ay u hawlgasho. Kala duwan Tareenada ICE, EuroCity, CityNight, Intercity, iyo khadadka TGV aad qaadi karto si ay meelo badan ee gobolka. Waxaad raaci kartaa tareen si Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, iyo Offenburg. tareenada kuwan ka dhan magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka, sidaas booqanaya Forest Black tareen noqon doonaa neecaw.
Wax kasta oo aad go'aansato in aad samayn, qalad ah ma waxaad hor mari doontaa, maxaa yeelay, booqashada Forest Black wuxuu noqon karaa sixir ah waayo-aragnimo. Waxaan leh this inta badan sababta oo ah waxaad isticmaali kartaa tareen muuqaal dabiici ah iyo uyeelay gobolka oo dhan. Waxaad la kulmi doontaa waxyaalaha ugu qurux badan Forest Black leeyahay in ay bixiyaan. The line muuqaal dabiici ah Black Forest ka shaqeeya wadada Offenburg-Konstanz.
Booqo Forest Black by Tareen markii aad doonto!
Sida aad u jeeddo, Quruxdii dadka gobolka iyo nolasha safarka tareenka safar this waayo-aragnimo cajiib ah. Waxaan aad ugu talinaynaa inaad soo booqato meelaha ugu sixir ah ee Germany ugu yaraan hal mar noloshaada! Si kastaba ha ahaatee, safarka in waa in ay muddo dheer ku filan si aad u aragto wax walba oo Forest Black leeyahay in ay bixiyaan!
Marka aad go'aansato in aad na soo qaato on dalab this, si xor ah u La xiriir Save A tareenka. Waxaan kaa caawin karaa inaad soo booqato Forest Black tareen oo aad hesho waayo-aragnimo dhab ah xusuus.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ru si / ja ama / iyo luuqado badan.
#kayn madow #blackforestgermany tareenada talooyin tareenka tareen safarka safarka tareenka